यस्ता खराब बानिका कारण किड्नी फेल हुनसक्छन् जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
हाम्रो शरिरको एक महत्व अङ्ग हो किड्नी । हामीले यसलाई के गर्दा स्वास्थ रहन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्छ । जुन खानपिनले किड्नीलाई असर गर्छ त्यो खानेकुरा खानु हुदैन ।
यस्ता छन् किड्नी फेल हुनुका मुख्य कारण
दैनिक ८–१० गिलास पानी पिउनुपर्छ । यो भन्दा कम पानी पिउनुले शरिरमा जम्मा भएको टाक्सिस किड्नी फंक्सनमा नराम्रो असर पार्छ । पानी धेरै पिउनाले पनि किड्नीलाई धेरै असर पर्ने गर्छ ।
चुरोट सेवन गर्नाले टाक्सिंस जम्मा हुनेगर्छ । यसले किड्नीलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छ । चुरोट वा तमाखु खाने सिगरेट पिउँदा वा तमाखु खादा शरीरमा विष जम्मा हुन्छ जसले किड्नीड्यामेज गर्ने सम्भावना हुन्छ । धुमपानले प्रेसर बढाउँछ र अन्त्यमा किड्नीलाई असर गर्छ ।
ज्यादा मात्रामा रक्सी पिउनाले किड्नीमा समस्या देखापर्छ । यसले लिभरमा पनि नोक्सान पुर्याउने काम गर्छ । धेरै मात्रामा कोल्ड ड्रिंक पिउनु पनि किड्नीको लागि राम्रो मानिदैन ।
जापानमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार धेरै कोल्ड ड्रिंस वा चिसो पिउनेलाई पनि किड्नी ड्यामेजको सम्भावना हुन्छ । कोल्ड ड्रिंसमा हुने अर्थोफोस्फोरस एसिडले किड्नीलाई गम्भीर हानी गर्छ ।
दिनमा ७ देखि ८ घण्टा नसुत्ने मानिसमा उच्च रक्तचाप र मुटुको समस्या हुने गर्छ । रक्तचाप र मुटु रोगले किड्नीको समस्या निम्त्याउँछ ।
चिसो सर्दी र चिसोको समस्या भइरहन्छ भने यसप्रति अज्ञानता नदेखाउनुहोस् । चिसोले पोस्ट इन्फेक्टिभ ग्लोमेरोनेफ्राइटिस नामक रोग लाग्छ । यसले किड्नीमा व्याक्टेरिया उत्पन्न गर्छ ।
राति ढीला सुत्ने र विहानपनि ढीला उठ्ने बानी आधुनिक जीवनको पर्याय जस्तै बनेको छ । यसरी राति ढीला सुत्दा मानिसहरुमा खाना खाने बानी पनि ढीलो हुन थालेको छ । यसले मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्न सक्छ ।
सुत्नमा समस्या हुन्छ
पाचन प्रक्रियामा समस्या
ब्लड प्रेसर बढ्छ
सुगर, डाइभिटिज, मधुमेह र चिनीरोग सबैलाई एउटै नामले चिनिन्छ । यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा शरीरमा चिनीको मात्रा धेरै देखिनु हो । तर, चिनीको मात्रा बढी देखिनु भनेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएको होइनकि हाम्रो शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कमी भएको हो ।
जे जति हामीले खान्छौ पिउँछौ (चाहे त्यो आलु होस्, भात होस्, ढिँडो, चाउचाउ, च्याख्ला, बिस्कुट जे सुकै होस्) सबै कुरा पेटमा गएर बन्ने सुगर नै हो। हाम्रो बुझाई गलत छ । सुगर हुनेले यो खान हुन्न त्यो खान हुन्न भनिन्छ। सुगर भनेको भात खान नहुने रोग भन्ने प्रचलन अझ बढी छ। आलु खान नहुने भनिन्छ। यो सबै गलत हो ।
रगतमा सुगरको मात्रा बढी देखिनु भनेको हामीले त खाना खायौं खाएको खानेकुरा पेटमा गएर सुगर बन्यो, त्यो कुरा इन्धनको रुपमा हाम्रो शरीरले प्रयोग गरेन भन्ने हो। तर, यसको अर्थ खाएको खाने कुरा पेटमा गयो चिनी बन्यो अनि खेर गयो ।
त्यो शरीरका अंगहरूले खान पाएन अनि अगंहरू भोकै रह्यो । हामीले खाएको खानेकुरा पेटमा जान्छ गएपछि पाचन भइसकेपछि चिनी बन्छ र पेटमा इन्सुलीन भन्ने हार्मोन उत्पादन हुन्छ। यसलाई पेन्क्रियाज भन्ने अंगले उत्पादन गर्छ । यो पेटको तलको भागमा हुन्छ ।
उत्पादन भएको इन्सुलीनले हामीले खाएर खानाबाट बनेको चिनी सबै अगंमा प्रवेश गराउने काम गर्छ । जब हाम्रो शरीरमा इन्सुलीनको मात्रा कमी हुन्छ खाएको चिज जुन चिनी बन्छ तर त्यो शरीरका अंगहरुमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । यही अवस्था हो सुगर भनेको ।
सुगर भनेको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएको होइन, शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कमी भएको हो । सुगर भनेको गुलियो चिज खाएर लाग्यो भन्ने गर्छौ चिनी धेरै भएर लागेको रोग भन्छौ तर यो गलत हो । सुगर भएको मानिसले गुलिया खान हुँदैन भन्ने होइन। एक चम्चा चिनी खादैमा केही फरक पर्दैन ।
जे खाए पनि पेटमा गएर बन्ने चिनी नै हो । चाहे गुलीयो चिज खानुहोस चाहे गुलियो नभएको खानेकुरा खानुस पेटमा गएर बन्ने चिनी नै हो । भात र आलु खान हुन्न भनिन्छ यो गुलियो भएर त होइन । यसमा कार्बोहाइड्रेट धेरै हुन्छ । सुगर भएको बेला कार्वोहाइड्रेट भएको खाने कुरा नखाने होइन कम खाने तर धेरै पटक खाने गर्नुपर्छ ।
सुगरमा के खाने कसो खाने भनेर सोच्न जरुरी छैन । हामीले बजारमा हेर्छौ सुगर फ्री बिस्कुट, सुगर फ्री केक, सुगर फ्री सेलरोटी भन्छौ, सुगर फ्री चक्लेट भन्छौ यो सबै नचाहिने कुरा हो । हामीले गुलियो मात्रै सुगर भन्न भएन गुलीयो भनेको प्रत्यक्ष सुगर हो तर अरु कुरा अप्रत्यक्ष सुगर हो । त्यही भएर सुगर भएको बेलामा के खाने भन्ने प्रश्न होइनकी कति खाने भन्ने प्रश्न हो ।
सुगर भएको मान्छेको लागि अलग्गै प्रकारको खाने कुरा जरूरी पर्देन । यस्तो चलन संसारमा छैन हाम्रो देशमा मात्रै किन यस्तो भनिएको छ । यो सुगर फ्री, त्यो सुगर फ्री भनेर नचाहिने हल्ला गरिएको छ । यो, त्यो खानेभन्दा पनि कति खाने भन्ने सोच्नुपर्छ ।
थोरै खाने धेरै चोटी खाने तर के खाने भनेर सोच्ने होइन । रक्सी चुरोट खान भएन यो सबैलाई थाहा छ। बोसो चिल्लो खान भएन । चिनीबाट बनेका चिजहरु धेरै सकभर खान भएन । अरू जे खाए पनि हुन्छ। धेरै खाने होइन तर धेरैपटक खानुपर्छ ।
सुगरको प्रमुख कारण जीवनशैली नै हो। हाम्रो खानपिन ठीक छैन। मान्छेहरू अल्छी भएका छन्। तरकारी लिन जान पनि गाडी र मोटरसाइकलको प्रयोग गर्छन। मोटोपन धेरै छ। खाना समयमा नखाने र एकै पटकमा धेरै खाना खाने गरिन्छ। खाना साथै सुत्ने बानी छ। व्यायाम गर्ने चलन छैन। तनावपूर्ण जीवन शैली छ। यो बाहेक बंशाणुगत कारणले पनि सुगर हुन्छ।
लापरबाही तरिकाले बिभिन्न किसिमका औषधि प्रयोग गर्दा पनि सुगर हुन्छ। पेटको रोगी, कलेजोको रोगी, पित्तको रोगी र पेन्क्रियाजको रोगी भएको मानिसलाई हुन्छ। रक्सी धेरै पिउनेलाई सुगरको खतरा हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कारण जीवन शैली नै हो। खाना धेरै खाने तर व्यायाम नगर्ने गर्दा सुगरको खतरा बढी हुन्छ।
सुगर भएको लक्षण देखिन्छ भन्ने छैन। सुगरको मुख्य लक्षण भनेको मुख सुक्ने पिसाब बढी लाग्ने हुन्छ। पानी बढी प्यास लाग्ने, शरीरको तौल घट्दै जाने, यौन इच्छा कम हुँदै जाने, यौन अगंहरू चिलाउँदै जाने हुन्छ। छालाहरु सुख्खा भएर जाने हुन्छ। आँखा धमिलो हुने हुन्छ।
यी लक्षणहरू सुगर भएको आठ, दस वर्षपछि मात्रै देखिन्छ। यसको लक्षण तुरून्तै देखिन्छ भन्ने छैन। त्यसैले बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा सुगरको मात्रा मात्रै जाच्ने चलन छ। यसले मात्रै हुँदैन। यसको लागि कोलस्ट्रोल,किड्नीको परीक्षण गर्नुपर्छ। सुगरको लागि विशेष परीक्षणसमेत गर्नुपर्छ।
सुगरको मुख्य उपचार भनेको खानपिन नै हो। जबसम्म खाने तरिका मिलाइँदैन जति औषधि खाए पनि ठीक हुँदैन। चिकित्सकको निगरानीमा बिभिन्न खालका औषधिको प्रयोग त गर्न सकिन्छ तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण बिरामी आफू सचेत हुनुपर्छ। आहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।
खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ। शरीरको तौललाई सन्तुलन गर्नुपर्छ। दिनमा तीस मिनेटदेखि पैतालीस मिनेटसम्म हिड्नुपर्छ। अथवा कुनै किसिमको व्यायाम गर्नुपर्छ। आहार, व्यवहार र विचार नबदलि जतिसुकै औषधि र सुई खोपे पनि ठीक हुँदैन।
यसले बिरामीलाई तुरुन्तै दुःख दिँदैन। यसले बिस्तारै मार्छ। यसलाई म ‘साइलेन्ट किलर’ भन्न रूचाउँछु। यसले भविष्यमा आँखा नदेख्ने बनाउनसक्छ। किड्नी फेल हुनसक्छ। हृदयघात हुनसक्छ। प्यारालाइसिस हुने खतरा हुन्छ। कतिपए अवस्थामा खुट्टासमेत काट्नुपर्ने हुन्छ।
यो अवस्था एकै दिनमा पुग्ने होइन। यसका लागि बीसौ वर्ष लाग्छ। त्यसैले यसलाई लापरबाही गर्न हुँदैन। हिजो सुगर ५ सय थियो आज ३ सय छ कन्ट्रोल भयो भनिन्छ यो गलत हो। सुगर जति भए पनि त्यसले बिगार्ने उत्ती नै हो।
Don't Miss it विचार नगरी विश्वास गर्दा कसरी आफैलाइ समस्या आइपर्छ ? जान्नुहाेस्
Up Next शरीरलाइ किन चाहिन्छ क्याल्सियम ? क्याल्सियम कसरी प्राप्त गर्ने ? जान्नुहाेस्
खुसी कहाँ र कसरी भेटिन्छ ? जान्रुहाेस्
भाैतिक सुविधाहरूले जिवनशैलीलाइ सहज बनाएता पनि मानिस दिन प्रति दिन खुसी देखी टाढा गइरहेकाे छ । खुसी खाेज्नकै लागी चलिरहेकाे…
कस्तो रोग हो एपेन्डिसाइटिस ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु, जान्नुहाेस्
एपेन्डिसाइटिस एउटा आकस्मिक अवस्था हो । यो रोगले समयमा उपचार पाएन भने मान्छेको ज्यानै जान पनि सक्छ । एपेन्डिक्स भन्ने…